Distrikan' i Sakaraha - Wikipedia
Distrikan' i Sakaraha
Ny Distrikan' i Sakaraha ao amin' ny Faritanin' i Toliara
Ny Distrikan' i Sakaraha dia distrika ao amin' ny Faritra Atsimo-Andrefana, ao amin' ny tapany atsimo-andrefan' i Madagasikara. I Sakaraha no renivohiny. Misy kaominina miisa 12 ny ao amin' io distrika io.
Ny mponina ao amin' ny distrikan' i Sakaraha dia nahitana fitomboana mafy hatramin' ny niandohan' ny fitrandrahana ireo vatosoa izay misy ao. Saika nandray tsara ny foko rehetra eto Madagasikara ity tanàna ity hatramin' ny nahitana ny safira. Ny isa-mponiny dia 74 000 tamin' ny taona 2001.
Mandalo ao amin' ny distrikan' i Sakaraha ny lalam-pirenena faha-7 (Toliara-Antananarivo). Ao avarany ny distrikan' Ankazoabo, ao andrefana ny distrikan' i Toliara II, ao avaratra-andrefana ny distrikan' i Morombe, ao atsimo ny distrikan' i Betioky, ao atsimo-atsinana ny distrikan' i Benenitra ary ao atsinanana ny distrikan' Ihosy izay ao amin' ny faritra Ihorombe. Ny distrikan' i Beroroha (avaratr' Ankazoabo) sy ny distrikan' Ampanihy (atsimon' i Betioky) ihany no tsy mifanila aminy amin' ireo distrikan' ny Faritra Atsimo Andrefana.
Mamokatra mangahazo sy vomanga ary vary ny distrikan' i Sakaraha. Mamatsy ny tanànan' i Toliara izy io. Misy ihany koa ao amin' ity distrika ity, saika amin' ny kaominina rehetra misy azy, ny safira. Ny Srilankey sy Tailandey indrindra no mividy sy manondrana safira mba hivarotra izany any Azia.
Ny Distrikan' i Sakaraha ao amin' ny Faritra Atsimo-Andrefana
Ao amin' ny Faritra Atsimo-Andrefana, ao amin' ny Faritanin' i Toliara voalohany ny Distrikan' i Sakaraha. Misy kaominina miisa 12 ny ao ka ireto avy izy ireo: Sakaraha, Ambinany, Amboronabo, Andamasiny Vineta, Andranolava, Bereketa, Mahaboboka, Miary Lamatihy, Miary Taheza, Mihavatsy, Mitsinjo ary Mikoboka.
Ireo distrika ao amin' ny Faritra Atsimo Andrefana:
Distrikan' i Benenitra
Distrikan' i Betioky-Atsimo
Distrikan' i Beroroha
Distrikan' i Morombe
Distrikan' i Toliara I
Distrikan' i Toliara II
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Distrikan%27_i_Sakaraha&oldid=1045080"
Voaova farany tamin'ny 14 Mey 2022 amin'ny 17:18 ity pejy ity.